लायन्स क्लबस् अन्तर्राष्ट्रिय डिष्ट्रिक्ट ३२५ ए २, नेपालद्वारा क्याबिनेट गठन – SunkoshiNews
लायन्स क्लबस् अन्तर्राष्ट्रिय डिष्ट्रिक्ट ३२५ ए २, नेपालद्वारा क्याबिनेट गठन
काठमाडा । लायन्स क्लबस् अन्तर्राष्ट्रिय, डिष्ट्रिक्ट ३२५ ए–२, नेपालकाडिष्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डा. सुशिला मल्लले लायन्स क्लबको संरचना अनुसार वर्ष सन् २०२०—२०२१ का लाागि विभिन्न पदाधिकारीहरु रहने गरी क्याबिनेट गठनगर्नु भएको छ । उहांले उक्तक्याबिनेटमा रहेका विभिन्न पदाधिकारीहरुको नामकाठमाडौंबाट जुममार्फत् आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
उक्त अवसरमा बोल्नु हुंदै डिष्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डा. सुशिला मल्लले विशेषगरी कोभिड–१९ को परिस्थितिले निम्त्याएको चुनौति सामना गर्न कोभिड प्रतिरोधी जनजागरणका लागि तत्पर भई काम गर्न सबै लायन सदस्यहरुलाई आव्हान गर्नुभयो ।
यसै क्रममा उहांले समस्यामा परेका जनसमुदाय र व्यक्तिलाई नेपालका लायन्स सदस्यहरुले खाद्यान्न लगायत, आर्थिक तथाभौतिक साधनको माध्यमबाट पुर्याउ“दै आएको सेवाकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र आगामी दिनमा यसको अझ आवश्यकता पर्नसक्ने अवस्थालाई ध्यानदिई चनाखो हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
लमजुङका ५ स्कुललाई गुरुङले दिलाए २ करोडको कम्युटर ल्यावका सामाग्री
काठमाडौँ महानगरले थाल्यो रात्रीकालीन सहरी सौन्दर्य कार्यक्रम, माइतीघर मण्डलाबाट परीक्षण